၎င်း၏ သား၆ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအပေါ် ဒီလောက်အထိ ရက်စက် နေသော်လည်း လူ အခွင့်အရေး အဖွဲ့ အစည်းများ ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေရပါသလဲ ?
အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွာန်နီ / ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှု နှင့် အကျိုးပြုမှု မှအပ ဘာများပြုခဲ့ပါသလဲ ?
ဒီဇငျဘာ ၂၅, ၂၀၁၉ - ၉:၅၂ ညနေ News Code : 996449 Source : ABNA Link:
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ အနေဖြင့် နိုင်ဂျီးရီးယားအစ္စလာမ္မစ်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ ၏ နောက်ဆုံး ကျန်းမာရေး အခြေအနေ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသည်မှာ - လက်ရှိ ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ကို ကုသနေသည့် ဒေါက်တာများ အနေဖြင့် ရှိက်္ခ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီး အစီရင်ခံစာ တင်ပြ မှု ကို ပြုထားပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိစ္စကြောင့် အပစ်ခံခဲ့ရသည့် အတွက် ရှိက်္ခ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်း ကျည်ဆံများကျန်နေပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မကောင်း ကြောင်း ၊ ၎င်း၏ မျက်လုံးတစ်လုံးသည် ကွယ်သွားပြီး သွေးအဆိပ်သင့်မှု နှင့် အခြား အက်အခဲများ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် “ အရေးပေါ်ကုသမှု”လိုအပ်ကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှု နှင့် အကျိုးပြုမှု မှအပ ဘာများပြုခဲ့ပါသလဲ ? ၎င်း၏ သား၆ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအပေါ် ဒီလောက်အထိ ရက်စက် နေသော်လည်း လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေရပါသလဲ ?
ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် ၏ လေးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အချိန်အခါ နှင့် ဆက်တိုက် ကျန်းမာရေး အခြေအနေမကောင်းဖြစ်နေသည့် ရှိက်္ခ အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ၊ (တစ်နည်းအားဖြင့် ) မဇ်ဟဗ်များကို စည်းလုံးအောင်ပြုပေးသူ ၊ မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၊ နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ္မစ် လှုပ်ရှားမှု နှင့် ရှီအာ ၏ ခေါင်းဆောင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်ပါဝင်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကို ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ အနေဖြင့်ဤသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား တရားမဝင်ဖမ်းချုပ်ထားကြောင်း ၊၎င်း ၏ အိမ်သူအိမ်သားများ နှင့် နောက်လိုက်များ သည်အကြိမ် ကြိမ် လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရကြောင်း လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့များ ဟု ညာသံပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဤကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ အရ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအား ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မွန်းမလွဲ မည် အလျှင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဗ်နာ သတင်းဌာန ၏ ဒါရိုက်တာ အနေဖြင့် သတင်း ဌာနများ ၊သတင်းထောက်များ သတင်းဌာန ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ကြိုဆို ကြောင်း ပြောကြားပြီး ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် သို့ ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ် မှ ဗကီယသွလ္လာဟ် အမည်ရှိ အေမာမ်ဘာရာ ၊ ဒါရို ရဲဟ်မဟ် နှင့် ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ၏ အိမ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဇာရေယာ ပြည်သူ အများအပြား ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဒဏ်ရာရအောင်ပြုခဲ့ကြောင်း ထိုအချိန်မှ စ၍ ရှိက်္ခ နှင့် ၎င်း၏ ဇနီးအား တရား မဝင် ဖမ်းချုပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဗ်နာ သတင်း ဌာန ၏ ဒါရိုက်တာ နှင့် မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ H.I ဆရက်ဒ် ဟိုစိန်နီ အာရေဖ် အနေဖြင့် မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်သည့် ဤ တသင်းစာ ရှင်း လင်းပွဲကို ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက် ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ သည် ဇာရေယာ ၏ လူမဆန်သည့် အဖြစ်အပျက် ၏ လေးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အချိန်အခါ ဖြစ်ကြောင်း ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အတွက် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည့် အခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ၊ တရားမဝင် အကျယ်ချုပ် ၊ ချုပ်ခံထားရမှ အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်း၍ အချုပ်ခံ ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ ၏ ပြောကြားမှု အပြီး တက်ရောက် လာသည့် သတင်းထောက်များ မှ မေးခွန်းများ ကို အဖြေများ ဖြေကြား သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်တွာန်နီ ၏ ပြောကြားချက်များ
အာယာသွလ္လာဟ်အနေဖြင့် အဖွင့်အမှာ စကား တွင် သတင်း ဌာန များအား ကြိုဆိုကြောင်း မဂ်ျမ၏ အသစ် မဟာဗျူဟာများကိုအတည်ပြုပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ် လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏မဟာဗျူဟာ မှာ စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ် ကို မိတ်ဆက် ရေး အတွက် အဓိက အခြေခံ အုတ်မြစ် လေးခု ဖြစ်သည့် ဆင်ခြင်တုံတရား၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊တရားမျှတမှု (ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားမှု ) နှင့် ဇွဲရှိရှိ ဖြင့် ခုခံကာကွယ် မှု တို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန်နီ အနေဖြင့် တရားမျှတမှု (ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားမှု ) နှင့် ဇွဲရှိရှိ ဖြင့် ခုခံကာကွယ် မှု ဆိုသည့် အခြေခံ အုတ်မြစ် နှစ်ခု နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်မှာ - အချို့ အနေဖြင့် အစ္စလာမ် သာသနာတော်အား ရဲဟ်မါနီယသ် ( သနားကြင်နာခြင်း ၊ဂရုဏာ ရှိခြင်း) တစ်ခုတည်း ဖြစ်သာ မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ လုံးဝမုချ အမှန် အစ္စလာမ်သာသနာ ၏ အရင်းအမြစ်သည် ရဲဟ်မါနီယသ် ( သနားကြင်နာခြင်း ၊ဂရုဏာ ရှိခြင်း) ဖြစ်ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (صلّی الله علیه وآله ) သည်လည်း ရဲဟ်မသ်သိုလ် လေလ် အာလမီးန် (စကြာဝဠာ အပေါင်းအတွက် ဂရုဏာ ရှင် မေတ္တာ ရှင် ) ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဂရုဏာ ရှင်မေတ္တာ ရှင်၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများ ကို ရင်၊မဆိုင်ရန် ဟူ၍ မဟုတ်ချေ။ မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများ ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းသည် အသိဥာဏ် နှင့် အသိဥာဏ်ရှင်များ ၏ လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကလည်း မတရားဗိုလ်ကျမှုများ၊ မတရားနှိပ်စက်လူမဆန့်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန် အလေးပေးဂရု ပြုထားပါတယ်။
၎င်းမှ ဆက်လက်ပြီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ - အစ္စလာမ်သာသနာ ၏ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး စည်းရုံးရေး ကိစ္စ တွင် မဇ်ဟဗ်များ စည်းလုံးရေး နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် ကိုနားလည်ခြင်းကိုလည်း အလေး ပေး ဂရုပြုထားပါတယ်။ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (علیهم السّلام) ၏ မဇ်ဟဗ် (ရှီအာ ) အားမလွဲမသွေ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အကောင်းတကာအကောင်းဆုံး အသွင်ပုံစံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နည်းလည် သဘောပေါက်သည့် လက်ခံထားသည့် စကားဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) ၏ အမြင် သဘောထားသည် လူမျိုးစု တစ်ခု အတွက် မဟုတ်ဘဲ တကမ္ဘာလုံး အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန်နီ အနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ပြောကြားသည်မှာ - ယနေ့ အစ္စလာမ် သာသနာ တော်အား မိတ်ဆက်မှု ပြုရာတွင် နှစ်မျိုး နှစ်စားသော် ဆိုးကျိုး ပြု မိတ်ဆက်မှု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်ခု မှာ လစ်ဘရယ် အစ္စလာမ် နှင့် နောက်တစ်ခု မှ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမြင် နှစ်ခု စလုံးသည် အစ္စလာမ် သာသနာ နှင့် အစ္စလာမ်အသိုင်း အဝိုင်း ကို ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမှာ လစ်ဘရယ်အစ္စလာမ် ၏ ရလာဒ် ကြောင့် ရှရီအသ် နှင့်ဝေး ကွာ ခြင်း တစ်ဦးတည်းဆိုင်ရာ ရှရီအီဥပဒေ နှင့် အများဆိုင်ရာ ရှရီအီဥပဒေ နှင့် ဝေးကွာ ခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်၏ ရလာဒ် ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကို တိုးပွားစေခြင်း ၊ ဘာသာတရား နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာမှ မသွန်သင်ထားသည့် စကားများ ကို သုံးစွဲမှု တို့ ဖြစ်လာ ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အာယာသွလ္လာဟ် အနေဖြင့် အနောက် နိုင်ငံသားလူငယ်များ ကို ရေးသား သီးကုံးထားသည့် ရဲဟ်ဗရ်ရေ အင်ကေလာဗ်၏ စာချွန်တော် သည် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်၏ အာနိသင်အား ပျက်ပြယ် အောင်ပြုနိုင်ခဲ့ ကြောင်း အနောက် နိုင်ငံသားလူငယ်များ အနေဖြင့် အစ္စလာမ် သာသနာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေဘုယျ အားဖြင့် ဇီယွန် ဝါဒီ အစ္စရေးတို့ ကိုင်တွယ်ထားသည့် မီဒီယာ ဖြင့်မလေ့လာ ဘဲ မလွဲမသွေ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် စွန္နသ်တော် တို့အားကိုးကား ၍ လေ့လာ ရန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွန် နီ အနေဖြင့် မိမိပြေားကြားမည့် အဓိက အကြောင်း အရာ ဘက်သိုထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ် ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် မွတ်စလင် (အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (علیهم السّلام) နောက်လိုက် ရှီအာများ ကို သတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီ ဆယ်ရာစုနှစ် အတွင်း မွတ်စလင်မ်များသည် မတရားဗိုလ်ကျသူများ မတရား ရက်စက် လူမဆန်သူများ ၏ပေါ်လစီကြောင့် စတေးမှုများ ပြုနေရကြောင်း၊ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အကြမ်းဖက် အခံရဆုံး မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကြောက်လန့်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု သည် မွတ်စလင်မ်များ အပေါ် ဖြစ်စေ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ အပေါ် ဖြစ်စေ ပြုခြင်းအား မည်သည့် နေရာတွင် ရှိ နေသည့် လူအခွင့်ရေး လောက သားများ အနေဖြင့် ရှုတ်ချ ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံမှု ပြုကြမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွာန်နီ အနေဖြင့်ဆက်လက်ပြီး ရှိက်္ခဇက်ဇာကီသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှု နှင့် အကျိုးပြုမှု မှအပ ဘာများပြုခဲ့ပါသလဲ ? ၎င်း၏ သား၆ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ရပါသလဲ ? သူအပေါ် ဒီလောက်အထိ ရက်စက် နေသော်လည်း လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေရပါသလဲ ? ဆိုသည့် အချက်များကို ထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်မံ၍အာယာသွလ္လာဟ် ရမ်တွာန်နီ အနီဖြစ် ဤကိစ္စ ကို နိုင်ဂျီးရီးယား အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး တည်ငြိမ်ရေးကို ရှေးရူ၍ ကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်း ၊ ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ အတွက် ကုသခွင့် အမြန်ဆုံး ပေးသင့်ကြောင့် နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း များ မှ ကုသမှု အတွက် အစီအစဉ်များ ပြုပေးသင့်ကြာင်းမိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဆရာဝန်များအနေဖြင့် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အား ကုသမှုကို တဖြည်းဖြည်းခြင်း စတင်ရန် မျှော်လင့် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဟျလဘေို့ကျ(သ) (အလိုငျးဟဈစလာမျ အဗျနာ) သတငျးဌာန
ဇာရယော ၏ လူမဆနျသညျ့ အဖွဈအပကျြ ၏ လေးနှဈမွောကျ နှဈပတျလညျ အခြိနျအခါ နှငျ့ ဆကျတိုကျ ကနျြးမာရေး အခွအေနမေကောငျးဖွဈနသေညျ့ ရှိက်ျခ အီဗရာဟီးမျ ဇကျဇာကီ ၊ (တဈနညျးအားဖွငျ့ ) မဇျဟဗျမြားကို စညျးလုံးအောငျပွုပေးသူ ၊ မဂျြမယဂေဟြာနီ အဲဟျလဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အဖှဲ့ဝငျ တဈဦး၊ နိုငျဂြီးရီးယား အစ်စလာမ်မဈ လှုပျရှားမှု နှငျ့ ရှီအာ ၏ ခေါငျးဆောငျနှငျ့ပတျသကျပွီး မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျလဘေို့ကျ(သ) (علیهم السّلام) ၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ တကျရောကျပါဝငျသညျ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ ကို ပွုခဲ့ပါတယျ။
ဟဇရသျ အာယာသှလ်လာဟျ ရဇော ရမျတှာနျနီ အနဖွေငျ့ဤသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ တှငျ ရှိက်ျခ ဇကျဇာကီ အား တရားမဝငျဖမျးခြုပျထားကွောငျး ၊၎င်းငျး ၏ အိမျသူအိမျသားမြား နှငျ့ နောကျလိုကျမြား သညျအကွိမျ ကွိမျ လူ့ အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံနရေကွောငျး လူအခှငျ့အရေး အဖှဲ့မြား ဟု ညာသံပေးနသေညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား အနဖွေငျ့ ဤကိစ်စ နှငျ့ပတျသကျပွီး မိမိတို့ ၏ တာဝနျ ဝတ်တရားမြား အရ ဆောငျရှကျပေးသငျ့ကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲအား ဒီဇငျဘာလ ၂၄ ရကျနေ့ အင်ျဂါနေ့ ခရဈသက်ကရာဇျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မှနျးမလှဲ မညျ အလြှငျ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ အဗျနာ သတငျးဌာန ၏ ဒါရိုကျတာ အနဖွေငျ့ သတငျး ဌာနမြား ၊သတငျးထောကျမြား သတငျးဌာန ကိုယျစားလှယျမြား ကို ကွိုဆို ကွောငျး ပွောကွားပွီး ဇာရယော ၏ လူမဆနျသညျ့ အဖွဈအပကျြ သို့ ထောကျပွ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ တှငျ နိုငျဂြီးရီးယား စဈတပျ မှ ဗကီယသှလ်လာဟျ အမညျရှိ အမောမျဘာရာ ၊ ဒါရို ရဲဟျမဟျ နှငျ့ ရှိက်ျခဇကျဇာကီ ၏ အိမျကို တိုကျခိုကျခဲ့ကွောငျး ဇာရယော ပွညျသူ အမြားအပွား ကို သတျဖွတျခဲ့ကွောငျး ဒဏျရာရအောငျပွုခဲ့ကွောငျး ထိုအခြိနျမှ စ၍ ရှိက်ျခ နှငျ့ ၎င်းငျး၏ ဇနီးအား တရား မဝငျ ဖမျးခြုပျထားကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
H.I ဆရကျဒျ ဟိုစိနျနီ အာရဖျေ အနဖွေငျ့ ဆကျလကျပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈတှငျလညျး နိုငျဂြီးရီးယား စဈတပျ မှ ကမ်ဘာ့ ကှဒျဈနေ့ ခြီတကျပှဲ ကို လူမဆနျစှာ တိုကျခိုကျခဲ့ပွီး ရှီအာဆနျ့ကငျြရေး ပွုခဲ့ကွောငျး ဤတိုကျခိုကျမှု ၂ခု တှငျ ရှိက်ျခ ဇကျဇာကီ ၏ သား ၆ ဦး ရှဟီးဒျ ဖွဈခဲ့ ရကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဗျနာ သတငျး ဌာန ၏ ဒါရိုကျတာ နှငျ့ မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျလဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ ပွနျကွားရေး တာဝနျခံ H.I ဆရကျဒျ ဟိုစိနျနီ အာရဖျေ အနဖွေငျ့ မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျ လဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထှထှေေ အတှငျး ရေးမှူးခြုပျ တကျရောကျသညျ့ ဤ တသငျးစာ ရှငျး လငျးပှဲကို ကငျြးပရသညျ့ ရညျရှယျခကျြ ကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ယနေ့ သညျ ဇာရယော ၏ လူမဆနျသညျ့ အဖွဈအပကျြ ၏ လေးနှဈမွောကျ နှဈပတျလညျ အခြိနျအခါ ဖွဈကွောငျး ရှိက်ျခ ဇကျဇာကီ အတှကျ ပိုမို၍ ခကျခဲသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ရငျဆိုငျနရေကွောငျး ၊ တရားမဝငျ အကယျြခြုပျ ၊ ခြုပျခံထားရမှ အကဉျြးထောငျသို့ ပွောငျး၍ အခြုပျခံ ရကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျ လဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ အာယာသှလ်လာဟျ ရဇော ရမျတှာနျနီ ၏ ပွောကွားမှု အပွီး တကျရောကျ လာသညျ့ သတငျးထောကျမြား မှ မေးခှနျးမြား ကို အဖွမြေား ဖွကွေား သှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျ လဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ အာယာသှလ်လာဟျ ရဇော ရမျတှာနျနီ ၏ ပွောကွားခကျြမြား
အာယာသှလ်လာဟျအနဖွေငျ့ အဖှငျ့အမှာ စကား တှငျ သတငျး ဌာန မြားအား ကွိုဆိုကွောငျး မဂျြမ၏ အသဈ မဟာဗြူဟာမြားကိုအတညျပွုပွီး ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မဂျြမယေ ဂဟြာနီ အဲဟျ လဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏မဟာဗြူဟာ မှာ စဈမှနျသညျ့ အစ်စလာမျ ကို မိတျဆကျ ရေး အတှကျ အဓိက အခွခေံ အုတျမွဈ လေးခု ဖွဈသညျ့ ဆငျခွငျတုံတရား၊ နာမျပိုငျးဆိုငျရာ ၊တရားမြှတမှု (ကြောသား ရငျသားမခှဲခွားမှု ) နှငျ့ ဇှဲရှိရှိ ဖွငျ့ ခုခံကာကှယျ မှု တို့ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အာယာသှလ်လာဟျ ရမျတှနျနီ အနဖွေငျ့ တရားမြှတမှု (ကြောသား ရငျသားမခှဲခွားမှု ) နှငျ့ ဇှဲရှိရှိ ဖွငျ့ ခုခံကာကှယျ မှု ဆိုသညျ့ အခွခေံ အုတျမွဈ နှဈခု နှငျ့ ပတျသကျပွီး တိုကျတှနျး ပွောကွားသညျမှာ - အခြို့ အနဖွေငျ့ အစ်စလာမျ သာသနာတျောအား ရဲဟျမါနီယသျ ( သနားကွငျနာခွငျး ၊ဂရုဏာ ရှိခွငျး) တဈခုတညျး ဖွဈသာ မိတျဆကျပေးကွပါတယျ။ လုံးဝမုခြ အမှနျ အစ်စလာမျသာသနာ ၏ အရငျးအမွဈသညျ ရဲဟျမါနီယသျ ( သနားကွငျနာခွငျး ၊ဂရုဏာ ရှိခွငျး) ဖွဈပါတယျ။ တမနျတျောမွတျ ကွီး မိုဟမ်မဒျ (صلّی الله علیه وآله ) သညျလညျး ရဲဟျမသျသိုလျ လလျေ အာလမီးနျ (စကွာဝဠာ အပေါငျးအတှကျ ဂရုဏာ ရှငျ မတ်ေတာ ရှငျ ) ဖွဈပါတယျ။ သို့သျော ဂရုဏာ ရှငျမတ်ေတာ ရှငျ၏ အဓိပ်ပာယျ မှာ မတရားဗိုလျကမြှုမြား၊ မတရားနှိပျစကျလူမဆနျ့မှုမြား ကို ရငျ၊မဆိုငျရနျ ဟူ၍ မဟုတျခြေ။ မတရားဗိုလျကမြှုမြား၊ မတရားနှိပျစကျလူမဆနျ့မှုမြား ကိုရငျဆိုငျခွငျးသညျ အသိဉာဏျ နှငျ့ အသိဉာဏျရှငျမြား ၏ လုပျရပျ တဈခု ဖွဈပါတယျ။ အစ်စလာမျသာသနာတျောကလညျး မတရားဗိုလျကမြှုမြား၊ မတရားနှိပျစကျလူမဆနျ့မှုမြားကိုရငျဆိုငျရနျ အလေးပေးဂရု ပွုထားပါတယျ။
၎င်းငျးမှ ဆကျလကျပွီးပွောကွားခဲ့သညျမှာ - အစ်စလာမျသာသနာ ၏ ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံး စညျးရုံးရေး ကိစ်စ တှငျ မဇျဟဗျမြား စညျးလုံးရေး နှငျ့ ကှဲပွားခွားနားသော အပွညျပွညျဆိုငျရာ နယျပယျ ကိုနားလညျခွငျးကိုလညျး အလေး ပေး ဂရုပွုထားပါတယျ။ အဲဟျလဘေို့ကျ(သ) (علیهم السّلام) ၏ မဇျဟဗျ (ရှီအာ ) အားမလှဲမသှေ ကမ်ဘာ ပျေါတှငျ အကောငျးတကာအကောငျးဆုံး အသှငျပုံစံ နှငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ နညျးလညျ သဘောပေါကျသညျ့ လကျခံထားသညျ့ စကားဖွငျ့ မိတျဆကျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဤအတှကျကွောငျ့ မဂျြမယဂေဟြာနီ အဲဟျလဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အမွငျ သဘောထားသညျ လူမြိုးစု တဈခု အတှကျ မဟုတျဘဲ တကမ်ဘာလုံး အတှကျ ဖွဈပါတယျ။
အာယာသှလ်လာဟျ ရမျတှနျနီ အနဖွေငျ့ ဆကျလကျပွီး ပွောကွားသညျမှာ - ယနေ့ အစ်စလာမျ သာသနာ တျောအား မိတျဆကျမှု ပွုရာတှငျ နှဈမြိုး နှဈစားသျော ဆိုးကြိုး ပွု မိတျဆကျမှု နှငျ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ တဈခု မှာ လဈဘရယျ အစ်စလာမျ နှငျ့ နောကျတဈခု မှ အစှနျးရောကျ အစ်စလာမျ ဖွဈပါတယျ။ ဤအမွငျ နှဈခု စလုံးသညျ အစ်စလာမျ သာသနာ နှငျ့ အစ်စလာမျအသိုငျး အဝိုငျး ကို ဆိုးကြိုးမြား ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။အကွောငျးမှာ လဈဘရယျအစ်စလာမျ ၏ ရလာဒျ ကွောငျ့ ရှရီအသျ နှငျ့ဝေး ကှာ ခွငျး တဈဦးတညျးဆိုငျရာ ရှရီအီဥပဒေ နှငျ့ အမြားဆိုငျရာ ရှရီအီဥပဒေ နှငျ့ ဝေးကှာ ခွငျးတို့ ဖွဈလာပါတယျ။ အစှနျးရောကျ အစ်စလာမျ၏ ရလာဒျ ကွောငျ့ အကွမျးဖကျမှုကို တိုးပှားစခွေငျး ၊ ဘာသာတရား နှငျ့ အစ်စလာမျသာသနာမှ မသှနျသငျထားသညျ့ စကားမြား ကို သုံးစှဲမှု တို့ ဖွဈလာ ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး အာယာသှလ်လာဟျ အနဖွေငျ့ အနောကျ နိုငျငံသားလူငယျမြား ကို ရေးသား သီးကုံးထားသညျ့ ရဲဟျဗရျရေ အငျကလောဗျ၏ စာခြှနျတျော သညျ အစှနျးရောကျ အစ်စလာမျ၏ အာနိသငျအား ပကျြပွယျ အောငျပွုနိုငျခဲ့ ကွောငျး အနောကျ နိုငျငံသားလူငယျမြား အနဖွေငျ့ အစ်စလာမျ သာသနာ နှငျ့ပတျသကျပွီး ယဘေုယြ အားဖွငျ့ ဇီယှနျ ဝါဒီ အစ်စရေးတို့ ကိုငျတှယျထားသညျ့ မီဒီယာ ဖွငျ့မလလေ့ာ ဘဲ မလှဲမသှေ ကမျြးတျောမွတျကုရျအာနျ နှငျ့ စှန်နသျတျော တို့အားကိုးကား ၍ လလေ့ာ ရနျ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ပွီးနောကျ အာယာသှလ်လာဟျ ရမျတှနျ နီ အနဖွေငျ့ မိမိပွေားကွားမညျ့ အဓိက အကွောငျး အရာ ဘကျသိုထောကျပွ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။နိုငျဂြီးရီးယား နိုငျငံ တှငျ နိုငျဂြီးရီးယား စဈတပျ ၏ ၂၀၁၄ ခုနှဈ နှငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ တှငျ မှတျစလငျ (အဲဟျလဘေို့ကျ (သ) (علیهم السّلام) နောကျလိုကျ ရှီအာမြား ကို သတျဖွတျမှု ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မကွာသေးမီ ဆယျရာစုနှဈ အတှငျး မှတျစလငျမျမြားသညျ မတရားဗိုလျကသြူမြား မတရား ရကျစကျ လူမဆနျသူမြား ၏ပျေါလစီကွောငျ့ စတေးမှုမြား ပွုနရေကွောငျး၊ ဆယျစုနှဈအတှငျး အကွမျးဖကျ အခံရဆုံး မှာ အစ်စလာမျ ဘာသာဝငျမြား ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ကွောကျလနျ့မှုနှငျ့ အကွမျးဖကျမှု သညျ မှတျစလငျမျမြား အပျေါ ဖွဈစေ မှတျစလငျမျမဟုတျသူမြား အပျေါ ဖွဈစေ ပွုခွငျးအား မညျသညျ့ နရောတှငျ ရှိ နသေညျ့ လူအခှငျ့ရေး လောက သားမြား အနဖွေငျ့ ရှုတျခြ ကွမညျဖွဈကွောငျး လကျခံမှု ပွုကွမညျ မဟုတျကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အာယာသှလ်လာဟျ ရမျတှာနျနီ အနဖွေငျ့ဆကျလကျပွီး ရှိက်ျခဇကျဇာကီသညျ ပွုပွငျပွောငျးလဲ မှု နှငျ့ အကြိုးပွုမှု မှအပ ဘာမြားပွုခဲ့ပါသလဲ ? ၎င်းငျး၏ သား၆ဦးကို သတျဖွတျခဲ့ရပါသလဲ ? သူအပျေါ ဒီလောကျအထိ ရကျစကျ နသေျောလညျး လူအခှငျ့အရေး အဖှဲ့အစညျးမြား ဘာကွောငျ့ နှုတျပိတျနရေပါသလဲ ? ဆိုသညျ့ အခကျြမြားကို ထောကျပွ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ထပျမံ၍အာယာသှလ်လာဟျ ရမျတှာနျနီ အနီဖွဈ ဤကိစ်စ ကို နိုငျဂြီးရီးယား အစိုးရအနဖွေငျ့ ငွိမျးခမျြး ရေး တညျငွိမျရေးကို ရှေးရူ၍ ကိုငျတှယျသငျ့ကွောငျး ၊ ရှိက်ျခဇကျဇာကီ အတှကျ ကုသခှငျ့ အမွနျဆုံး ပေးသငျ့ကွောငျ့ နိုငျငံတကာ လူအခှငျ့အရေး အဖှဲ့အစညျး မြား မှ ကုသမှု အတှကျ အစီအစဉျမြား ပွုပေးသငျ့ကွာငျးမိမိအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာဆိုငျရာဆရာဝနျမြားအနဖွေငျ့ ရှိက်ျခ ဇကျဇာကီ အား ကုသမှုကို တဖွညျးဖွညျးခွငျး စတငျရနျ မြှျောလငျ့ ကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။